कर्णाली, सिर्जना र राजनीति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ९, २०७५ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — सुर्खेत उपत्यकाको बीचतिरको एउटा थुम्कोमा २०७५ फागुन २७ गते घमाइलो दिनमा पुग्छु । थुम्कोमा रहेको प्राचीन काँक्रेविहार हेर्न जंगलको बाटो हुँदै कलेजका शिक्षक तथा मेरा पूर्व विद्यार्थीहरू मलाई थुम्कोमा पुर्‍याउँछन् । उनीहरू खुसी र विस्मय मिसिएका वर्णन गर्दै जान्छन् । अत्यन्त कलात्मक एउटा विहारको खण्डहर आँखासामु खुल्छ ।
एकैचोटी मलाई शिखर शैलीका उर्ध्वगामी गजुरका आकार, चारैतिर छरिएका ससाना खोपा र ‘रेलिकरी’ भित्र राखेका बुद्ध र मायादेवीका मूर्ति अनि हिन्दु धर्मजनिन आकार बोकेको एउटा समयले झ्वाप्प छोप्छ । वरिपरि जंगलमा छरिएका शिलाखण्डमा भवनका आकार, खम्बा, ज्ञान बुझाउने आभामण्डलले मलाई पूर्ण समयको चित्र देखाउन खोज्छन् ।
मलाई कम्बोडियाको एङकोर वाटमा गरेको अगस्ट २००८ को भ्रमण सम्झना हुन्छ । एङकोरमा प्राचीन वनभित्र अनन्त सुन्दर आकारमा कुँदिएका खण्डहरका प्रस्तरकलाले कैयौं सुन्दर संरचना भत्केको बुझाउँछन् । काँक्रेविहार यसैगरी असरल्ल सानो आयतनभित्र छरिएको छ । पुरातत्त्व विभागका मानिस यताउता आलस्यले अर्ध्दमुदित आँखा लाएर केही गरिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, केही त गर्दैछन् ।
यहाँको विश्वविद्यालयका भाषाशास्त्री मेरा पूर्व विद्यार्थी रमेश खत्रीले पठाएको सिनास पत्रिकाको जनवरी २००६ मा प्रकाशित लेखमा पुरातत्त्वविद् प्राध्यापक डिल्लीराज शर्मा यस काँक्रेविहार र यसमा भएका आकारलाई एक रहस्य भन्छन् । उनी यसका आकार र संरचनाको वास्तुकलाजनिन व्याख्या गर्छन् । मलाई मायादेवी र बुद्धको जन्मको आकारले खिच्छ ।
‘मायादेवीका सपना’ भन्ने माओवादी जनयुद्धका बेलाको अवस्थालाई लिएर लेखेको शान्तिको सन्देशयुक्त नाटकमा मैले सिद्धार्थको जन्मको परिकल्पना गरेको दृश्य छ । निशा पोखरेलले यसलाई निर्देशन गर्दा एउटा भूगोल र आकारहीन थलो र समयको बलियो नाटकीय परिवेशको रङ्गमञ्चीय रचना गरेको सम्झिन्छु ।
मलाई काँक्रेविहारले एउटा समय खोलिदिन्छ । राष्ट्रिय नाचघरका महाप्रबन्धक राजेश थापाले सुर्खेतमा आयोजना गरेको रारा राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने निम्तोमा आएको छु । पुग्ने बित्तिकै सहआयोजक अनि नाटककार आरंग नेपालका गणेश गौतम भन्छन्– यसमा अनुप बराल, वीरेन्द्र हमाल, सावित्री मल्ल कक्षपती, राजन खतिवडा, कान्छी महर्जन, रमेशरञ्जन झा, प्रवीण पुमा, चक्रप्रसाद पाण्डे, अशोक थापा, पुरु लम्साल, प्रवीण खतिवडा र मेरा गरी कार्यपत्र र अन्य प्रस्तुति छन् ।
मलाई लाग्छ, यो विहारको यो भग्न अवस्थामा छरिएको एउटा कालीक चेतना, बुद्धको जीवन यो काँक्रेविहारको डिल्लीराज शर्माले भनेको ‘रहस्य’ यो विहारमाथिको हमला यसमा लुकेका राजाहरूका शक्तियुद्धले प्रस्तुति कलालाई देखाउँछन् । इतिहासमा यस्ता घटनाका नाटकपछिको शून्य खुला आकाशमुनि भग्न कलेवरमा छरिएर बसेको हुन्छ । मलाई नालन्दा, ग्रीक र रोमका खण्डहरका सम्झना हुन्छन् ।
एथेन्सको एक्रोपोलिसमुनि भग्ननाट्यमञ्चको पुनरुत्थान भइरहेको सन् २००२ मा देखेर मैले एक प्राध्यापकलाई सोधेको थिएँ । तिनले भनेका थिए– रङ्गमञ्चको कथा पेरिक्लिजको सम्पन्न एथेन्स राज्य र त्यसमाथि अरूबाट भएका हमलासँग जोडिएको छ । काँक्रेविहारको यो परम सुन्दर थलोमा नाट्य प्रस्तुति कला र हमलाको सम्बन्ध छैन भन्न सकिँंदैन । नेपालीरङ्गमञ्च र विश्व रङ्गमञ्चको सम्बन्ध भन्ने विषय मलाई दिएको हुनाले त्यसैमाथि बोल्नुछ ।
मलाई भने काँक्रेविहार सेरोफेरोमा मन गइरहेछ । आएको केही घन्टा पछिदेखि नै मेरा पूर्व विद्यार्थी विष्णुकुमार खड्का र रेशम विष्ट, लेखक र विद्यार्थीका पनि विद्यार्थीहरूले तीनवटा प्रवचन दिन लगाइसकेका छन् । मेरो नाटकमाथि कार्यपत्र सुन्न उनीहरू नाट्य आयोजकले मिलाएको सानो हलमा खचाखच भएर कोचिँंदै बस्छन् अनि छलफलमा भाग लिन्छन् । त्यस अघि ६ बजे नै एउटा डिस्कोर्स दिइसकेको हुन्छु । त्यसबारे पछाडि केही भन्नुछ ।
काँक्रेविहारपछि मलाई मेरा विद्यार्थी सुर्खेत उपत्यका देखिने पहाडको चोटीमा लान्छन् । अनि उतापट्टि ओरालोतिरबाट दैलेखको भूमि देखाउँछन् । उता सिन्जातिरको पर्वत शृङ्खला देखाउँदै भन्छन्– दैलेखका हरेक ठाउँका पत्थरशिला इतिहास बोल्छन् । भाषाशास्त्री रमेश खत्री भन्छन्– अनन्त शिलाहरू भाषा बोल्ने पत्थर जिह्वा हुन्, यहाँ ।
मलाई यो भूमि र यताका मानिसको स्वतन्क्रताको शत्तिले भित्र छुन्छ । संघीयताको अन्तर्य भनेको यही स्वतन्त्र सिर्जनात्मक अनि मौलिकताको चेतना हो भन्ने लाग्छ । कर्णाली प्रदेश त्यो चाहनाले टनाटन भरिएको छ । बेलुका महोत्सवमा कर्णालीको नाटक हेर्छु । त्यसमा त्यही आत्मविश्वास छताछुल्ल भएर देखापर्छ ।
कर्णालीका सबै सांस्कृतिक चित्रण भएका छन्, त्यसमा । कर्णालीलाई त्यस नाटकमा एक सम्पन्न र आत्मविश्वासले भरिएको प्रदेशको रूपमा देखाइएको छ । त्यहाँ विकास एउटा यथार्थ, एउटा लोलुपता वा ‘प्यासन’ भएर आउँछ । जीवनका आलम्बन परिचित छन्, तर त्यसमा भोलिको समय छाउँछ । संघीय राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि भएर आउँछन्, नाटकमा । एक पुरुष छन्, ती जो कर्णाली प्रदेशमाथि सरकारले सम्पन्न गर्नलागेका वैभवशाली योजनाबारे सुनाउँछन् । कर्णालीका नाच र गायन हुन्छन् ।
मानिस एकता र प्रेमले आबद्ध छन् । यदाकदा काठमाडौंले देखाउने गरेको कर्णालीको हामी पछाडि परेका छौं भन्ने बोधको त्यहाँ विनिर्माण हुन्छ । कर्णालीका केही मध्ययुगीन संस्कारको प्रस्तुति काठमाडौंका रङ्गमञ्चमा उतैका नाट्य समूहले नदेखाएका होइनन् । काठमाडौं फर्केपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवलाई ल्याएको कर्णाली आर्टस सेन्टरका हीरा बिजुली नेपालीले लेखेर निर्देशन गरेको नाटक ‘गर्भ छिटा’ मण्डला थिएटरमा गएर हेर्छु ।
यो नाटक प्रस्तुति, रङ्गमञ्च, अभिनय, निर्देशन र रङ्गमञ्चीय क्षेत्रीय लक्षणा वा ‘सेमियोटिक्स’को दृष्टिले अत्यन्त सफल छ । हीरा भाइले निर्देशकीयमा भनेका शब्द मार्मिक छन् । ती भन्छन्– कर्णालीललाई पिछडिएको र गरिबीले पिसिएको भनेर मानिन्छ, नेपालमा । ‘कर्णालीसँग भएका मानवीयता र सामाजिक गतिशीलतालाई अधिकांशले बुझेकै छैनन्’ ।
सुर्खेतमा विद्यार्थीहरूले मलाई एउटा विषय दिएर त्यहाँका साहित्यकार, शिक्षक र बुद्धिजीवीलाई सम्बोधन गर्न लगाउँछन् । रेशम विष्ट मलाई यति लामो शीर्षक दिन्छन् । प्रस्तुति नेपालीमा हुने भए पनि अंग्रेजीमा लेखिएको छ, शीर्षक । ‘नेपालमा साहित्य, भाषा र राजनीतिले सामना गरेका सिर्जनात्मक चुनौती’ शीर्षक ठूलो भए पनि मन पर्छ । राजनीतिका सिर्जनात्मक चुनौती भन्ने खण्डले मलाई आकर्षित गर्छन् ।
हलभरि विभिन्न पुस्ताका मानिस खचाखच देखेर द्रवित र ठाउँ नपुगेको देखेर दुःखित हुँदै शिक्षक हुनुको सामर्थ्य निकालेर चर्को स्वरमा बोल्छु । मलाई मनमा लागेका कुरालाई यसरी राख्छु । नेपालमा अहिले जति सिर्जनात्मक चुनौती अघि कहिल्यै अनुभव गरिएन । संघीयताको परिकल्पना सिर्जनात्मक चुनौती थियो । विविध चलन, भौगोलिक अवस्था, इतिहास र भाषिक पहिचान भएका क्षेत्रलाई प्रदेश वा ‘प्रोभिन्स’मा बाँडेर संघीयता बनाउने चाहना र प्रयोग सिर्जनात्मक चुनौती थियो ।
एउटा नेपाल भनेर बनेको र चिनिएको पुरानो देशमा ‘प्रोभिन्स’का रचना गरेर देखाउने सिर्जनात्मक सामर्थ्य जर्मनका समाजशास्त्री युर्गेन हेबरमासलाई पनि चकित पार्ने किसिमको थियो । त्यो एउटा सत्य पहिचान थियो भन्ने कर्णालीमा देखिएको तरङ्गले बुझाउँछ । राम्ररी विचार गर्दा र मानिसमा आएका नयाँ जाँगर र विश्वास हेर्दा कर्णाली एउटा सिर्जनात्मक सामर्थ्य खोतलेर आफू उठेको देखिन्छ ।
सुर्खेतका मेयर देवकुमार सुवेदी, उपमेयर सुश्री ढकाल, प्रदेश प्रमुखदेखि अरू क्षेत्रका नरनारीसँग कुरा गर्दा त्यही आत्मविश्वास र नवजागरणको तरङ्ग देखिनु त्यही हो । म भन्छु, कर्णालीमा आफू हुने चाहनाको पछाडि संस्कृति, भाषा, एकपटक राम्ररी बनेर पटक–पटक बाहिरका मानिसका हमलाले काँक्रेविहार जस्तो भत्केको तर फेरि उठेको यसको इतिहास छ ।
यसका आर्थिक स्रोतका बलिया आधार छन् । यहाँ सिर्जनाले समय रच्ने मानिस बस्छन् । अहिले यसको राजधानी सुर्खेतका सपनामा त्यो तरङ्ग देखिन्छ । तरङ्गलाई योजनामा राम्ररी नबदल्ने हो भने अनि सहरीकरण र विकासका सपनाका असम्पृक्त प्रयोग भए भने ठूला समस्या आइपर्ने कुरा अरू देशका यस्तै अवस्था भोगेका इतिहासले देखाउँछन् ।
राजनीति सिर्जनात्मक छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि बोल्छु । सबै राख्ने यहाँ ठाउँ छैन । संक्षेपमा, नेपालमा आएका परिवर्तन सिर्जनात्मक हुन् । सिर्जनात्मक हुनु चुनौती हो । राजनीतिमा त्यो सिर्जनात्मक चुनौती सामना गर्न अधिनायकवादी वा नियन्त्रण गर्ने भावना नै बाधा हुन्छ । देखिएको छ । नेपालको यो परिवर्तनको कालखण्डमा सिर्जनात्मक चुनौती बुझ्ने राजनेता, दलका नेता र सरकार चाहिन्छन् । त्यो कुरामा निकै चुनौती थपिंँदै गएको देख्छौं, म भन्दै जान्छु ।
सिर्जनात्मक चुनौती अरू चुनौतीजस्तो हुँदैन । त्यो रचनात्मक नै हुन्छ । त्यो समानताको भावना र सम्मानले मात्र जन्मिन सक्छ । अहिले त्याग र सम्मानको संस्कृतिलाई मलजल गर्नुपर्छ । सिर्जना विविध हुन्छन्, बहुल हुन्छन् । तिनलाई मास्ने, सिद्धान्त हाँक्नेका सोच एकलवादी हुन्छन् । ‘ओलीगार्क’हरूले देखेका सपनाले आजको नेपालको संघीयतालाई काम दिंँदैन । अहिले विविध तर एक हुने युग आएको छ ।
सिर्जनात्मक पक्ष जनमानसमा धेरै हुन्छ । तिनका मनबाट जन्मिने आशा र सपनामा नै सिर्जनाका सम्भावना भेटिन्छन् । राज्य चलाउने दल र शक्ति बोकेकाहरूकन चेतना भया ।
प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०८:३९
चैत्र ९, २०७५ सञ्जीव उप्रेती
काठमाडौँ — काँकरभिटाको कला साहित्य उत्सव दौरान निक्कै घतलाग्दा छलफल चले । ‘लोकतन्त्र तथा आलोचनात्मक चेत’बारे हरि शर्माको प्रवचनबाट प्रारभ भएको महोत्सवमा समकालीन आख्यान, भूराजनीतिक चिन्तन, पर्यावरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोककला, मिडिया तथा जेन्डर लगायत विविध विषयमा चर्चा चले ।
म सहभागी भएको प्यानललाई सुप्रिया मानन्धरले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र डा. अमिना सिंह र डा. भाष्कर गौतम उक्त प्यानलका अन्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
अमिना सिंह तथा भाष्कर गौतमले शिक्षा पद्घति, समाजशास्त्र र शोध बारेका समस्याका ‘संकट’लाई जोडेर महत्त्वपूर्ण विमर्श गर्नुभयो । मेरो अध्ययन र अनुभव भने मानविकीसित जोडिएकाले त्यसकै वरिपरि रहेर आफ्ना कुरा राखेँ । यस लेखमा मानविकी बारेका समस्या वरिपरि नै केन्द्रित भएको छु ।
कुनै बेला केन्द्रीय अंग्रेजी विभागमा हरेक वर्ष एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्थे । सेमेस्टर सिस्टम सुरु भएपछि अहिले प्रतिसेमेस्टर पचासजना जति हुन्छन् । केन्द्रीय नेपाली विभागमा यो वर्ष सातजना विद्यार्थीमात्र भर्ना भए भन्ने खबर छ । इतिहास विभागमा त झन् विद्यार्थी नै आउन छाडे भन्ने कुरो पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएको थियो ।
यस बाहेक दर्शन, कला, साहित्य, भाषा—साहित्य र समाजशास्त्रका विभागमा नेपालमा मात्र नभई प्रायः संसारका अन्य मुलुकमा समेत विद्यार्थीे संख्या घटेका समाचार अनलाइनमा बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छ । सायद यिनै तथ्यलाई मनन गरेरै आयोजकले प्यानलको र्शीषक ‘मानविकी र समाजशास्त्रका संकट’ राख्नुभएको थियो ।
मेरो विचारमा विषयलाई लक्षण (सिमटम) र रोग (डिजिज) को भिन्नतालाई बुझ्दै केलाउनु बडी उपयुक्त हुनेछ । अनिद्रा एउटा लक्षण हो भने निद्रा नलाग्नुले थाइराइड वा मुटु वा अन्य कुनै गम्भीर रोगतिर संकेत गरेको हुनसक्छ । यसरी बुझ्दा मानविकीका विभागहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्नुलाई लक्षण वा समस्या (वा संकट) भन्ने हो भने अहिले देखिएको संकटको मूलरोग अरू नै केही हुनसक्छ । उक्त रोगलाई बुझ्न निम्ति मानविकीको इतिहासलाई संक्षेपमा केलाउन आवश्यक छ ।
ग्रीक तथा रोमन साम्राज्य दौरान रेटोटिक र ग्रामर नामको विषय पढाइन्थ्यो । उक्त विषयको उद्देश्य थियो, विद्यार्थीलाई शुद्घ भाषा लेख्न सिकाउनु र तिनलाई आलंकारिक भाषाका प्रयोग गर्दै राजनीतिक र नागरिक मुद्दाबारे सार्वजनिक बहसमा भाग लिन सक्षम बनाउनु । सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तको यस किसिमको आमअभ्यास लोकतन्त्रको प्रारम्भिक उदाहरण थियो ।
तर समस्या जरैमा थियो । आलंकारिक भाषाको दक्षतामार्फत सार्वजनिक छलफलमा सहभागी हुने हक मध्यम र उच्च वर्गका, जमिनमा स्वामित्व भएका पुरुषहरूलाई मात्र थियो । महिला तथा दास वर्ग उक्त ‘लोकतान्त्रिक’ छलफलबाट बहिस्कृत थिए । अर्को शब्दमा भन्दा भाषा—साहित्यको शिक्षण लोकतन्त्रसित जोडिएको थियो । तर त्यो लोकतन्त्र अर्कै भने केही वर्ग र व्यक्तिका लागिमात्र थियो ।
सत्रौं र अठारौं शताब्दीलाई युरोपमा ‘पुनर्जागरण’ तथा ‘तार्किकताको युग’को रूपमा मानिन्छ । यस युगमा दर्शन तथा भाषा—साहित्य बारेका शिक्षण र पठन प्रक्रिया मानवतावादका आदर्शसित जोडिन पुगे । संसारभरि छरिएका मानवको साझा मानवता के हो ? मानव तथा सम्पूर्ण ब्रह्मान्ड (र, त्यसमा निहित ‘वैज्ञानिक’ र तार्किक ज्ञानबीच) के कस्तो सम्बन्ध छ आदिजस्ता कुरा भौतिक विज्ञानले मात्र नभई कला, साहित्य दर्शनले समेत उजागर गर्न सक्छ भन्ने सोच फैलियो ।
त्यसै अनुरूप अठारौं शताब्दीमा उदय भएका राष्ट्र/राज्यहरूले विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाका मानविकी विभागहरू निम्ति पैसा छुट्याउन थाले । दर्शन, साहित्य, कलाको अध्ययन, अध्यापनमा पनि रुचि बढ्दै गयो ।
ग्रीक तथा रोमन साम्राज्यकै समयदेखि चल्दै आएको मानविकीको समस्या नयाँ स्वरूपमा देखापर्‍यो । जसरी ग्रीसका ‘लोकतान्त्रिक’ अभ्यासमा नारी र भूमिहीनहरूको सहभागिता थिएन, नयाँ ‘तार्किक’ युरोपमा पनि महिला र अन्य वर्ग र जातिका पनि ‘मानवता’को खाकाभित्र पर्न सकेनन् । युरोपेली राष्ट्र/राज्यहरूका कर्मकाण्ड पितृसत्तामक संरचना र मानसिकताबाटै निर्देशित रहे भने महिलाले मत दिने अधिकार पाउन दुई सय वर्ष अझै कुर्नुपर्‍यो ।
मध्य र उच्च वर्गका युरोपेलीहरू सेलोन र कफी हाउसमा मानवतावादबारे छलफल गरिरहँदा उक्त छलफलको ‘आर्थिक आधार’ अफ्रिका, एसिया तथा दक्षिण अमेरिकामा फैलिएको औपनिवेशवाद तथा दास प्रथाले कसरी निर्माण गरेको छ भन्ने बारेका तथ्य तथा तथ्यांकबारे ‘तार्किक छलफल’ हुन सकेन ।
साथै ‘मानव सभ्यता’ र मानवका निम्ति सहरहरू बनाउँंदा प्रकृति र अन्य जीवको कस्तो दोहन भइरहेछ भन्ने पनि छलफलमा आएन । युरोपेली तार्किकताले मानवतालाई बडो सीमित ढंगले परिभाषित गर्‍यो । मानवतावाद ‘मानव’ हटाउंँदै गयो, खालि मानवतावादको ‘वाद’मात्र बाँकी रह्यो । जसको केन्द्रमा केही विशिष्ट वर्ग र लिङ्गका मानव थिए ।
बीसौं शताब्दीका दुई मुख्य विश्वयुद्घ र त्यसपछि पुँजीवादी पश्चिम र सोभियत शैलीको साम्यवादबीच चलेको शीतयुद्घ दौरान पश्चिममा मानविकीका नयाँ उपयोगबारे छलफल भयो । एउटा मत थियो– दर्शन तथा भाषा—साहित्यले मानव भित्रका नैसर्गिक प्रजातान्त्रिकमूल्य र मानवीयताको विकास गराउँछ । यसै विचारअनुरूप मानविकी विभागहरूको कोष थपियो, प्राध्यापक र विद्यार्थी दुवैका संख्या बढ्न थाले । पुँजीवादी पश्चिम मानविकीलाई प्रजातन्त्रसित जोड्दै साम्यवादी ‘खतरा’संँग भिड्न तयार भयो ।
सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खालको विघटन तथा शीतयुद्घको समाप्तिपछि भने मानविकीको नयाँ संकट देखापर्‍यो । पर्खालको विघटनलाई पुंँजीवादी प्रजातन्त्रको विजय र साम्यवादको हारको रूपमा अर्थ्याइयो । यस किसिमको बुझाइले मानविकीका विभागहरूको महत्त्व कम गर्‍योे । अब साम्यवादी विचारको प्रतिरोधमा प्रजातन्त्रलाई सशक्त बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता रहेन । पश्चिमी शैलीको बजार व्यवस्थाको विश्वब्यापीकरण भइसकेको छ र प्रजातन्त्रको मर्मलाई उदारवादी बजार व्यवस्थाभित्रै संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्न ब्यापक हुँदै गयो ।
यस किसिमको सोचका केही परिणाम गएका पच्चीस, तीस वर्षभित्र चुलिँदै आएका छन् । तीमध्ये एउटा परिणाम हो– उपभोक्ता संस्कृति (कन्जुमर कल्चर) को विश्वव्यापी विजय यात्रा र अर्को हो उपयोगितावाद (युटिलिटेरियानिजम) को विश्वव्यापी फैलाउ ।
दर्शन, अध्यात्म र साहित्यका विद्यार्थीलाई सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै घचघचाइरहने एउटा प्रश्न छ– म को हुँ ? धार्मिक विश्वदृष्टिले निर्देशित समाजमा यस प्रश्नको जवाफ प्रायः यसरी आउंँछ– म एक आत्मा हुँ ।
अथवा हिन्दु, मुस्लिम, क्रिस्चियन वा बौद्घ हुँ । राष्ट्रियताको भाष्यको जगमा उभिएर त्यही प्रश्नको जवाफ दिंँदा कसैले भन्लान्–म नेपाली, भारतीय, अमेरिकन वा जर्मन आदि हुँ । मानवतावादको संकथनको धरातलमा उभिएर जवाफ दिँदा भन्न सकिएला– म अरू केही नभएर मात्र एक मानव हुँ ।
उपभोक्तावादको जगजगी फैलिँंदै गएको अहिलेको अवस्थामा उक्त आद्य प्रश्नको उत्तरमा ‘म आइफोन टेन प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुँ’ वा म ‘फलानो ब्रान्डको टाइसुट लाउने वा फलानो मोडलको मोटरसाइकल वा कार चढ्ने व्यक्ति हुँ’ भन्नेहरू देखापर्न थालेका छन् । अर्को शब्दमा भन्दा उपभोगले नै मानिसको परिचयलाई परिभाषित गर्ने प्रक्रिया संसारभरि बढ्दै जाने देखिन्छ ।
उपभोक्तावादको विजय यात्रामा उपयोगितावाद पनि मिसिएको छ । कुन किसिमको शिक्षा आर्जन गर्दा वा सीप सिक्दा आफूलाई बजारमा सफल कर्ताका रूपमा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने चेतना विद्यार्थीमा बढ्दै गएको छ । कम्प्युटर साइन्स वा जीवविज्ञान पढ्दा आफ्नो सीपलाई बजारमा बेच्न बढी सजिलो हुन्छ । किनकि यी विषयहरूसित जोडिएको ज्ञान र सीप बजारका लागि बढी आवश्यक छ ।
आधुनिक संसारमा लगातार प्राविधिक परिवर्तन भइरहेछन् । यस प्राविधिक युगमा कम्प्युटर साइन्स, जीवविज्ञान, तथ्यांक शास्त्र लगायतका विषयको महत्त्व पक्कै बढेको छ । त्यसैले यी विषयमा पक्ष भएरपैसा कमाउनु र आफ्नो जीवनशैली उकास्नखोज्नु स्वाभाविक इच्छा हो । यसैले गर्दा पनि दर्शन, भाषा–साहित्य र समाजशास्त्रका विभागहरूमा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको हुनसक्छ ।
मैले अघि नै भने अनुसार विद्यार्थीको संख्या घट्नु रोगको लक्षणमात्रै हो । रोग अर्कै छ । रोग हो– शीतयुद्घको समाप्तिपछिको विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेशमा मानविकीले आफ्नो प्रकृति र उद्देश्यलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न नसक्नु ।
कांँकडभिटा कला–साहित्य महोत्सव दौरान धरानको बीपी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू पनि आउनुभएको थियो । उहाँहरूले भन्नुभयो–हामीले चिकित्सा विज्ञानबाहेक समाजशास्त्र र साहित्यबारे पनि पढ्नुपर्छ ।
चिकित्साशास्त्र, कानुन, व्यापार लगायतका अन्यउपयोगी क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि दर्शन, साहित्य, कला समाजशास्त्रबारे जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने चेतना गएको दस–पन्ध्र वर्षमा बढ्दै गएको देखिन्छ । डाक्टर वा वकिललाई साहित्य वा दर्शनबारे जानकारी छ भने ऊआफ्ना ‘क्लाइन्ट’प्रति बढी संवेदनशील हुनसक्छ र त्यसै कारणले गर्दा बढी राम्रो डाक्टर वा वकिल बन्न सक्छ भन्ने मान्यता प्रचलनमा आउँंदैछ । उपभोक्ता संस्कृतिको समसामयिक युगमा मानविकी र समाजशास्त्रका नयाँ उपयोगिता खोज्ने क्रमलाई यस किसिमको चेतना र मान्यताले सघाउ पुर्‍याउनेछ ।
मानविकी र (समाजशास्त्रको) क्षेत्रमा देखापरेको लाक्षणिक संकटलाई मात्र नभएर यसको जरामा रहेको रोगकै निदान खोज्ने हो भनेचाहिँ यस विषयमा अझै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।समसामयिक युगमा दर्शन, भाषा–साहित्य र अन्य मानविकीको किन आवश्यकता छ ? किनकि मानविकीले मानिसमा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्छ । यसको मतलब जीवविज्ञान वा भौतिक विज्ञानजस्ता क्षेत्रमा आलोचनात्मक चेतको आवश्यकता हुँदैन भन्ने होइन ।
तर मानविकीमा प्रयोग हुने चेतको प्रकृति भिन्न हुन्छ । विज्ञानमा प्रायः गरेर आलोचनात्मक चेत आफू बाहिर निर्देशित हुन्छ– उक्त चेतले तथ्यांक केलाउँछ, तथ्यांक र तथ्य परिवर्तित भएको अवस्थामा आफ्नो सैद्धान्तिक मोडल पनि परिवर्तित गर्दै लैजान्छ । मानविकीले भनेबाह्य जगतलाई मात्र नभएर आफ्नै आन्तरिक सोचलाई बारम्बार प्रश्न गरिरहने, आफैलाई दोहोर्‍याएर हेरिरहने फरक किसिमको चेतको विकास गर्न मद्दत गर्छ । यस किसिमको आलोचनात्मक चेतको आवश्यकता मानवता र लोकतन्त्र दुवैलाई छ ।
एक दृष्टिले बुझ्दा ‘मानवता’ र ‘लोकतन्त्र’ दुवै अमूर्त धारणा हुन् । न हामीले बजारमा मानवताको टोपी लगाएको कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई भेट्न सक्छौं न गाउँ–सहरका गल्ली–सडकमा ‘लोकतन्त्र’को कपडा लगाएको कुनै व्यक्ति, सत्ता वा स्वरूपलाई । मानवता र लोकतन्त्र दुवै संसारभरि बाँचिरहेका नरनारीका विचार र व्यवहारमार्फत नै व्यक्त हुन्छन् ।
त्यसैले हरेकले आफैलाई दोहोर्‍याएर हेर्ने, परिवर्तनको निम्ति तयार रहने, आफ्नै विचारका सीमालाई प्रश्न गरिरहने किसिमको आलोचनात्मक चेत विकास हुनसके मात्र मानवता र लोकतन्त्रका परिधि फराकिला हुँदै जानेछन् । लोकतन्त्रका नयाँ परतहरू उघ्रिँदै जानेछन् । लोकतन्त्र र मानवताको परिधिमा केही विशेष जात, वर्ग, लिङ्ग र भूगोलका मानिसमात्र हुने छैनन् । सबै समाहित हुँदै जानेछन् । मानवले मानव केन्द्रित विश्वदृष्टि त्यागेर पशुपन्छी र प्रकृतिबारे पनि सोच्न थाल्नेछन् ।
अर्को सम्भावना पनि छ– उपभोक्ता संस्कृतिको रमझम र रमरममा आफैलाई बिर्सेर आलोचनात्मक चेत हराएका मानव झन्–झन् आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी बन्दै जानेछन् । प्रकृतिको विनाश बढ्नेछ । लोकतन्त्रको क्षितिज खुम्चनेछ । अर्कार्लाई पछारेर आफू ठूलो भइरहने दंगली मानसिकताले अझै ब्यापकता पाउनेछ । मानिस त्यसबेला पनि लगातार दौडिरहेकै हुनेछन्, किनकि छेउछाउका सबै दौडिरहेकै हुनेछन् । तर दौडेर पुग्ने कहाँ भनेर सोच्ने चेतसमेत बजारको रमझममा धुमिल हुँदै जानेछ ।
दर्शन, साहित्य, कला, समाजशास्त्र आदिजस्ताविषयले मानिसलाई त्यस दैनिक दौडादौडी र दंगली मानसिकताबाट केही समयमात्र भए तापनि बाहिर निस्केर आलोचनात्मक ढंगले सोच्न ‘क्रिटिकल स्पेस’ दिन्छन् । त्यसैले तिनले मानवता र लोकतन्त्रका परिधिलाई लगातार फराकिलो बनाउँदै लैजानसमेत मद्दत गर्छन् । मानविकीको महत्त्व यसैमा छ ।
प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०८:३७